ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ပြာသို
တောရွာလေးတစ်ရွာမှာ မောင်ပြာသို ကိုမွေးခဲ့တယ်။ အေးချမ်းတဲ့နှင်းနဲ့ပြာသိုလမှာ မအေးချမ်းစွာနဲ့ပြာသိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ထိုညက အဖေက ကိုင်းထဲက သခွားခြံမှာ ညသွားစောင့်အိပ်တယ်။ ဒီနှစ် သခွားတွေ အထွက်များတော့ ပြာသိုတို့ 
မိသားစုအတွက် ချောင်လည်မှာလေ။ တိရိစ္ဆာန်ရန်နဲ့သူခိုးရန်ကလည်း ကြောက်ရသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အဖေက ကိုင်းထဲက တဲအိမ်လေးမှာ တစ်ယောက်တည်း ညသွားစောင့်အိပ်တယ်။ ပြာသို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့အမေ အသက်ကကြီး အရုပ်ကလေးတွေလို စုပြုံနေတဲ့ သားသမီးတွေ မွေးပြီးတာတောင် ပြာသို့ ကို လောကထဲရောက်အောင် ဘာလို့ခေါ်လာသေးသလဲ အမေရာ။ တကယ်ဆို လူ့ ဘ၀ ဒီလောက် ကြမ်းတမ်းမယ်ထင်ရင် ပြာသို အမေ့ဝမ်းထဲ ရောက်မလာပါဘူး။ တောရွာဓလေ့ မွေးကာနီးအမျိုးသမီးတွေအတွက် နာ့စ်မတွေ မလိုဘူး။ အကောင်းစားဆေးဝါးတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ ပြာသို့ ကို မွေးဖွားခါနီ အမေက ခြံထွက်နနွင်းတစ်ချို့ နဲ့လုံချည်ဟောင်းတစ်ချို့ သာ အမေ ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညက
အမေ့ဝမ်းထဲမှာ ပြာသိုလေးက အပြင်လောကကို ရောက်ဖူးချင်လှပါပြီဆိုပြီး ရုန်ကန်နေလေရဲ့။ လက်သည်က တစ်ခြားရွာက ကိုယ်ဝန်သည်တစ်ယောက် မွေးဖို့ သွားနေတယ်။ နာကျင်မှုတွေနဲ့မိခင်မေတ္တာတွေ အပြည့်နဲ့အသက်ကိုလောင်းကြေးထပ်၊ လက်သည်မပါဘဲ အမေက ပြာသို့ ကို သူတစ်ယောက်တည်းမွေးခဲ့တာလို့ပြန်ပြောပြတိုင်း အမေ့ကို သနားတဲ့စိတ်၊ လေးစားမိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြာသို့ ရဲ့ အနှိုင်းမဲ့ မိခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးမိတယ်။ တကယ်ဆို လောကထဲကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရောက်လာပြီး မွေးခဲ့တဲ့ ကောင်က ဘ၀ကြမ်းကြမ်းတွေကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ကျော်ဖြတ်ဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ အခုတော့ ...။
ပြာသို လောဘ မကြီးခဲ့ပါဘူး။ သူများတွေ ၀တ်ချင်သလို ပြာသိုလေးလည်း ၀တ်ချင်ခဲ့တာ။ သူတို့ စားသလို စားချင်ခဲ့တာပါ။ လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက ဘ၀ကြမ်းကြမ်းတွေက သူ့ ကိုစိန်ခေါ်နေပြီ။ပြာသိုဒီနေ့ကျောင်းစတတ်မယ့်နေ့ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မှာလား စစ်ဗိုလ်ကြီးလုပ်မှာလားလို့မေးတိုင်း ပြာသိုလေးအမြဲဖြေခဲ့တာ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးလုပ်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀ အစ်ကို ၀တ်လို့ အရောင်တွေ လွင့်ပြယ်နေတဲ့ ကျောင်းဘောင်းဘီလေးက ပြာသို့ အတွက်ပေါ့။ လွယ်အိတ်လေးကတော့ တစ်ခါခါ အဖေ မြို့ကို တက်ရင် လွယ်နေကျ အိတ်ကလေး။ ပြာသို သိပ်ကြိုက်တဲ့ အပြာရောင်အိတ်ကလေးမှာ အမွှေးဖွားဖွားလေးတွေနဲ့ ။ မရှက်တတ်ခဲ့ဘူး ဟောင်းနေပေမယ့်။ ဖိနပ်လေးကပြတ်သွားပေမယ့် ၀ယ်ပေးမယ်ပြောလိုက် မ၀ယ်ပေးနိုင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ အမေ့ဝမ်းနည်းမျက်နှာကိုသူက မသိနားမလည်ခင်ထဲက အလွတ်ရခဲ့တာ။ ကျောင်းစာအုပ်လေးလား။ အဖေ ပြာသို့ အတွက် ၀ါးချမ်းလေးတွေနဲ့ ညှပ် မိုးတွင်းဘက် ငါးမျှားတဲ့အချိန်သုံးတဲ့ အပ်ချည်လုံးအကြီးစားနဲ့ချုပ်ပြီးသုံးရတဲ့ ကျောင်းစာအုပ်လေးတွေပါ။ ကျောင်းမှာ ဆန်ပြုတ်တိုက်အုံးမယ်တဲ့ ပိုက်ဆံထည့်ရဦးမယ်။ အမေ့ဆီကတောင်းနေတာလည်း ၃ ရက်ရှိပြီး မတောင်းချင်တော့ဘူး။ ပြာသို အမေ့ကိုလည်း သနားလှပြီ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ဆန်ပြုတ်တိုက်မယ့်နေ့။ ကျောင်းမသွားတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ပြာသိုက ဘ၀နာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အဆင့်တစ်မရခဲ့ပေမယ့် ပြာသို ဘယ်တော့မှ စာမေးပွဲမကျခဲ့သလို ရွာက ကျောင်းကလေးမှာ စာတော်တဲ့သူတွေထဲ ပါခဲ့တာပေါ့။ ထောက်ပံ့ကြေးဆု လျှောက်ကြမလားတဲ့ ဆရာမအသံနဲ့ အတူ ကျောင်းသား ၆ ဦးလက်ညှိုထောင်းလိုက်ကြတဲ့ အဲဒီအထဲမှာ ပြာသိုလည်းပါတာပေါ့။ ထောက်ပံ့ကြေးဆုရရင် အမေ့ဆီက သူတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ ခက်တာက လိုတာ ၅ ဦးထဲ။ အခု လက်ညှိုးထောင်နေတာက ၆
ဦးဖြစ်နေတယ်။ တစ်တန်းလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြာသို့ ဘေးက သူငယ်ချင်းက “ဆရာမ ..ပြာသို့ ကိုရွေးပါ။ သူအမေ့က ဒီနှစ်နေလည်းမကောင်း သူတို့ မောင်နှမတွေကလည်း အများကြီး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဘာသာစုံးပေါင်းရေးနေတာ ကြည့်ကြည့်ဆရာမ” ဆိုပြီး အဖေချုပ်ပေးထားတဲ့ ၀ါးခြမ်းညှပ် ကျောင်းစာအုပ်လေးကို ဆရာမကို လှမ်းပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ပြာသို့ ဘ၀မှာ ၀မ်းအနည်းဆုံးတွေနေ့ တွေထဲက တစ်နေ့ ပါ။ တစ်တန်းလုံးက သူ့ ကိုကြည့်နေကြတာ သနားတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့။ ပြီးတော့ လက်ထောင်ထားကြတဲ့ အတန်းဖော်လေးတွေ အားလုံးလည်း မတိုင်ပင်ဘဲ လက်ကလေးတွေ ပြန်ရုတ်လိုက်ကြတယ်။ ၀မ်းနည်းလိုက်တာ။ အဲဒီနေ့ က ပြာသို ကျောင်းလွယ် အိတ်ကို ကိုင်ပြီး အတန်းထဲက
ပြေးထွက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အမေအိမ်ကို မနားတမ်းပြေးပြီး ပြာသို ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုခဲ့တယ်။ အမေက ဘာမေးခွန်းတစ်ခုမှ မမေးဘဲ ပြာသို့ခေါင်းကိုပွတ်သပ်နေတာပေါ့။ မော့ကြည့်လိုက်တဲ့ အခိုက် အမေ့ပါးပြင်မှာမျက်ရည်စတွေနဲ့ ...။
P.S = လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ နှစ်လောက်ကရေးဖုးတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ် ပြန်ရှာတွေ့တာနဲ့တင်လိုက်တာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူများဆီကကြီးပြန်တွေ့တာ ရေးတာကတော့ ကျနော်ပါး) Posted by
ဖတ်ပြီး ဂရုဏာသက်မိတယ်...။ ငယ်ငယ်တုန်းက မောင်နှမတွေ ကျောင်းအတူသွားတာကိုလဲ ပြန်သတိရမိတယ်...။ စာရေးကောင်းတယ် နာ့မောင်လေး...။
ပုလဲတွေ ခပေါ့ ပြာသိုရယ် ...
၀မ်းနည်းလွယ်ပါတယ်ဆိုမှ .. နော် ..း(ခင်မင်လျှက်ဆောင်းနှင်းရွက်
အိုး... ဒီမနက်ဘယ်လိုဖြစ်နေပါလိမ့်.. စာတွေလိုက်ဖတ်တာ... တိုတိုလေးတွေနဲ့ ရင်ထဲထိတဲ့ စာတွေများနေတယ်... စာလေးက တိုတယ်.. ဒါပေမယ့်.... ပါးပါးလေးနဲ့ ထိတယ်ဗျာ... အရေးအသားညှက်ပါပေ့..း))ခင်မင်လျက်နေ၀သန်
ကျနော်စိတ်မကောင်းပါဘူး........... ပြာသိုဟာ ကျနော်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ ........
ဘဝနဲ့ယှဉ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပါလား။ အရေးအသားလေးတွေ ကောင်းတယ် မောင်မျိုးရေ။ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် လက်တွေ့ဘဝမှာ ရင်ဆိုင်နေရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိကြတယ်။စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
I had been read and really like this post since long long ago. If i'm not wrong, you posted it in mgmyo.co.cc, isn't it?
အခုမှ အစ်ကို့စာတွေဖတ်ဖြစ်တာပါ... အားပေးနေမယ်
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား ကျနော်...ဟိုး အရင်တုန်းက မောင်မျိုး ပါ။ အမှတ်မရှိသေးပဲ ဘလော့ပြန်ရေးချင်မိတာနဲ့ တတိယ အကြိမ်ပေါ့ ။
ရေးချင်မိတဲ့အခါ ရေးပြီး ပျောက်ချင်တဲ့အခါ ပျောက်မိမှာပါ ။အဲ့....မေ့လို့ ကျနော်စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားတတ်တယ် ဒါပေမယ့် ပြင်ရမှာ ပျင်းတယ် :)
Number of View: 245 စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာနှင်ကျွန်မ ဆုံဆည်းမှုက စာပေကိစ္စရပ်များမှ စတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဆရာ့၏အမေရိကန်စကားပြောသင်တန်းတွ...
မျှော်လင့်မထားဘဲ တွေ့ရှိခဲ့ကာ ပြန်တမ်းတတိုင်း ကြည်နူးမဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံအကြောင်း ပြောပြပါရစေ။ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်သူက ‘ဖေဖေ’လို့ ကျွန်မ တစ်...
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေ့ကပေါ့။ ဝတ်စားပြင်ဆင်ပြီးလို့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကျွန်မ ဖိနပ်စီးနေတဲ့
အချိန်မှာ ဖေဖေ ကျွန်မ အနားကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူ့အကျီအ...
Lots of folks would love to fly on private planes, but it’s very expensive to achieve this. Instead,they select for fractional jet cards. This is reallya...
ကျွန်တော့် အဒေါ်တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ၉ တန်းလောက်တုန်းက ပြောဖူးတယ်။ ငါ့တူ မင်းအရွယ်ရောက်တော့မယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတော့ မင်းကြိုက်တဲ့ လမ်းကို မင်း...
လက်ထဲက စုတ်တံတွေကို အသာပင့်ပြီး နောက်ထပ် သူပြောလာမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်အာရုံစူးနစ် နားထောင်နေတယ်။ ကျနော်က ပန်းချီဆွဲတာဆိုပေမယ့် ဒီပန်းချီကားကို ဖန်ဆင်...
Profile ပုံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်းတော့လည်း ပြောစရာ ရှိပါတယ်။ များများစားစားလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေ။
ပြောရမယ် ဆိုရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ထွက်ေ...
အိမ်အပြင်ဘက်မှာ နှင်းပွင့်များ တဖွဲဖွဲကျနေသည်မှာ ပန်းချီကား တစ်ချပ်ပမာ ရှိလှ၏။ အမြင်သာလှ၍ မေးခိုက်အောင်ပင် ချမ်းစိမ့်နေစေသော နှင်...
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲ
စေခဲ့တာလား.ဒါဆိုရင် ခုနေ မချစ်တော့တာ ငါ့အပြစ်မဟုတ်တော့ ဘူး ချစ်သူ။ ။
ခုတ်တော့ ခုတ်လိုက်တာပဲ ဒါပေမယ့်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ထိတယ် .....
ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ ညည်းတွားတယ် " ခင်ဗျားတို့အသွေးအသားတွေရဲ့ မောဟ အညှီနံ့ တွေက ကျုပ်ဇွယ်ကိ...
cialis 40mg cialis medication
generic cialis no prescription buy viagra 10mg
စိတ်ထဲ ထင်သည့် အတိုင်း မွန်းလွဲ တစ်နာရီ ၀န...
ဘဝဆိုတာ စက်ဘီး စီးရသလိုပဲ ဟန်ချက်ညီညီ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး နင်းရတယ် စက်ဘီးစီး မတက်ခင်ကဆို ခဏခဏ ချော်လှဲကျ စက်ဘီး စီးရင် အဆင်းကို လိမ့်စီးချရတာ အရမ်းကို လွယ်သ...
အတွေးဟာ နှလုံးသားကို ချောင်းမြောင်းခြောက်လှန့်တယ်
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ လူဆိုးတွေသေသွားခဲ့ကြတာ ကြာပါပြီ
ချစ်သော ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရဲ့ ရာဇ၀င်
ဒွိဟမြုံ ချတုံချဆဲ။ ကျွန့်မျက်ပျံ ခွန်းဆက်ဟန်
ဘာသာတရားဟာ ဘာအတွက်လဲ .. ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်သူ ရှိသလို ၊ ဘာသာတရားကို မကိုးကွယ်သူလည်း ရှိပါတယ် ။ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်သူတွေမှာ ဘာအတွက်ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြတာပါလဲ ဆ...
ကဗျာကို ကပျာကယာ တောက်ချလိုက်တဲ့အခါ (သက်ထွေး)
ဒီပွဲမှာ ငါရှုံးတယ် ငါ့ကိုငါ မိမိရရချုံ့ကြည့်တဲ့အခါ တစ်သက်လုံး သေဖေါ်ညှိမရတဲ့စိတ်က ရယ်သံမောသံတွေ ထုတ်ချင်းပေါက်တဲ့အထိ ငါ့ဘေးမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတာ ငါတွေ့တယ် ဒါ...
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်ကျော်က အင်္ဂလိပ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ English Book Club တစ်ခုက အင်္ဂလိပ်စာပေကို စိတ်ဝင်စားသူများ အင်္ဂလိပ်စာ အဖတ်နဲ့ အပြော တိုးတက်ချင်သူများ ဆက်သွယ်...
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေသလော ။ မြင်တတ်အောင်လေ့လာ သင်ယူနေဆဲပါ ။ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါစေ..... အကျိုးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်ပြိုပျက်သွားရသည်ချည်းပ...
ကျမ အမျိုးသားရဲ့ ညီဝမ်းကွဲတယောက်က အုတ်၊သဲ၊ ထုံး၊ ကျောက် ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ အရောင်းအ၀ယ်လိုက်လာတော့ ညီမဖြစ်သူကို စာရင်းကိုင်ရင်း ဆိုင်ထိုင်စေပါတယ...
မြန်မာ့အလှ မြန်မာ့ရှုခင်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ မြင်ကွင်းတွေကို ဝေဝေဆာဆာနဲ့ လှပစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး ဂျာမနီ နိုင်ငံ တဝှမ်းနဲ့ ဥရောပ တဝှမ်း မြန်မာကို သိအော...
မနက်ဖြန် လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အတူ ခေါင်းထဲကို တွေးစရာ လေးတွေ နဲနဲဝင်လာပါတယ်…။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာကို ဘယ်လိုအရာနဲ့ တိုင်တာခြင်းကို ခေါ်ပါသလဲ….? ကိုယ်ကတော့ ...
” ငါလစ်တော့မယ် သားကြီးရာ ” … စကားသံ အဆုံး .. စိတ်ပျက်လက်ပျက် လှည့်ကြည့်လုိုက်မိတယ် .. မင်းကလဲကွာ .. ငါ ညစ်နေလို့ မင်းများရှိမလားဆိုပြီး ငါ ဂိမ်းဆိုင်လိ...
ရင်နှင့် ရင်းသမျှ ~ ~
မျှော်ကြည့်လေ ရှုမဆုံးတဲ့ ကွင်းပြင်တွေမှာ
တို့ ဘိုးဘေးတို့ထားခဲ့တဲ့ အမွေအနှစ်တွေရှိတယ် ...
သိန်းသန်း ကုဋေချီတဲ့ အုတ်ချပ်တွေကြား
Pois é. Quando parecia que o indio finalmente iria se acalmar após o "casamento", eis que o indígena que reclama da falta de cavalo (o pangaré que deram pe...
မိးအိမ်လေး ဖျက်ဆို ငြိမ်းသွား
စာရွက်အလွတ် တစ်ချို့ ပြန့်ကျဲ
ဒီစာကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ မစ်ရွမ်နေကတော့ စကားပြောပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ် လေးနှစ်သက်တမ်း ထပ်မံ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရမယ့် အိုဘားမားအလာကို အားလုံးက စောင့်ေ...
ဒီပိုစ့်က ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတဲ့ပထမဆုံးပို့စ်တခုပါ။ ဘာရယ်လုို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အပျင်းပြေဖြစ်အောင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောကို ဘယ်လိုနားလည်သေ...
Moveable ကို ရပ်တန့်ပါတော့မယ်။ တစ်နေရာတည်းကလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် … ဖြောင့်တန်းသောလမ်းတွေရဲ့ ဆုံးမှတ်ဟာ သဲသဲကွဲကွဲ တွေ့မြင်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကွေ့ကောက်သောလမ်းေ...
ငါ့ အုတ်ဂူရှေ့ မှာ မငိုပါနဲ့
အဲဒီမှာ ငါမရှိဘူး၊ ငါ မလဲပြိုဘူး။
ငါဟာ မင်းနားမှာ အမြဲရှိတဲ့ လေပြေ
ငါဟာ ဆောင်းတွင်းမှာ ကျတတ်တဲ့ နှင်း
ငါဟာ အေးချမ်းအောင် ဆောင်ကြ...
အရင်တစ်ပတ် က ကိုရင်ညိန်း တစ်ယောက် အင်တာနက်သုံးခွင့်ရတာနဲ့ မေတ္တာစာလေး တစ်ပုဒ်တင်ခဲ့ပါတယ် ။ အစဉ်သင့်တုန်း ဓာတ်စာတိုက်ပုံးလေး စစ်လိုက်တော့ ထူးခြားတဲ...
သူများအကြောင်းပြောလို့ ဝတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောကြတာပေါ့